Dr. Tint Swe's Writings: Highest IQs in History ဉာဏ်ရည်အမြင့်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ
ဆရာရှင့် သမီးရဲ့ သမီးလေးက အခုလေးလရှိပါပြီ။ ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်အဖွံ့ဖြိုးဆုံးအချိန်က မွေးစကနေ နှစ်နှစ်အတွင်းလို့ သိရပါတယ်။ သမီးလေးကို ဦးနှောက်ကောင်းကောင်းဖွံ့ဖြိုးအောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးချင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဖွင့်ထားတဲ့ right brain development school တွေက ၆လကနေ စတက်လို့ရတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ သင်တန်းကြေးတွေ အရမ်းများလို့ ကိုယ့်ဘာသာလေ့လာချင်လို့ပါ။ အဲဒါ right brain development, left brain development နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်နည်းတွေ လေ့လာသင်ကြားနိုင်တဲ့ website name တွေ သိချင်ပါတယ်ရှင့် parenting နဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာလို့ရမဲ့ website တွေရော Facebook မှာရှိရင်လဲသိချင်ပါတယ် ငွေကြေးအများကြီး အကုန်မခံနိုင်ပေမဲ့ သမီးလေးကို အကောင်းဆုံးပျိုးထောင်ပေချင်လို့ပါရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သီအိုရီတွေ၊ နည်းလမ်းတွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ သင်တန်းတွေ ကျောင်းတွေလည်း ရှိလာတယ်။ ထိရောက်မှု ဘယ်လိုပါလဲ။ တလောကပဲ အိုင်ကျူ နဲ့ အီးကျူစာ တင်ပါတယ်။ အဲဒီနှစ်ခုက ဉာဏ်ရည်ကို စနစ်တကျတိုင်းတာနည်းဖြစ်တယ်။ ဉာဏ်သာမက အသားဖြူချင်သူ၊ အရပ်ရှည်ချင်သူ၊ ချေမောလှပချင်သူတွေ အလွန်ကို များတယ်။ ဆေးတွေလည်း ရောင်းကောင်းတယ်။ ကျွန်တော့်မှာက အချိန်ကုန်ရတယ်။ ကြော်ငြာဆေးတွေသာ ရှိတယ်။ ဉာဏ်ကောင်းဆေးမရှိပါ။ ဆောရီး။
၁ဝ။ Stephen Hawking စတီဖင် ဟောကင်း IQ 160
၉။ Albert Einstein အဲလ်ဗတ် အိုင်းစတိုင်း IQ 160-190
၈။ Judit Polgar ဂျူဒစ် ပိုလ်ဂါ IQ 170
၇။ Leonardo da Vinci လီယိုနာဒို ဒါ ဗင်ချီ IQ 180-190
၆။ Marilyn Vos Savant မယ်ရီလင် ဗော့စ် ဆားဗင့် IQ 190
၅။ Garry Kasparov ဂယ်ရီ ကက်စ်ပါးရော IQ 194
၄။ Kim Ung-Yong ကင်မ် အန် ယောင်း IQ 210
၃။ Christopher Hirata ခရစ်စတိုဖါ ဟာရာတာ IQ 225
၂။ Terence Tao တားရေ့စ် တာအို IQ 225-230
၁။ William James Sidis ဝီလီယမ် ဂျိမ်းစ် ဆီဒစ် IQ 250 – 300
အသက် ၁၁ နှစ်သားမှာ ဟားဗတ်ကျောင်းသားဖြစ်။ သင်္ချာသင်ယူ။ အသက် ၄၆ နှစ်မှာ ဦးနှောက်ထဲသွေးထွက်ပြီး ကွယ်လွန်။
၁။ ကျောင်းကောင်းတွေကနေ ပါရမီရှိအောင် သင်မပေးနိုင်ပါ။
၂။ ပါရမီရှိသူတွေကတော့ အကောင်းဆုံးကျောင်းတွေကို ရောက်ကြတယ်။
၃။ အိုင်ကျူအမြင့်ဆုံးဆိုသူတွေဟာ ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးမှာ စိတ်ဝင်စားကြတယ်။
၄။ အိုင်ကျူမြင့်ဆေး၊ ဉာဏ်ကောင်းစေတဲ့ဆေး မရှိ။
၅။ အိုင်ကျူအမြင့်ဆုံး (၁ဝ) ဦးထဲမှာ ဆရာဝန်တွေမပါ။ No Smile! စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေမပါ။ Smile!
Iron Deficiency Anemia သံဓါတ်နည်း သွေးအားနည်းရောဂါ...
ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းမှာ BCIM ကို တရုတ်ဖယ်ရှား...
The Psychology of Superstition အယူစွဲများ၏ စိတ်ပညာ...
ခင်သန်းနုယူရန် ထီအတိတ်နဲ့ထိုးသူ တသိန်းဆုပေါက်
တတောဝင်ထွက် တကုန်းတက်၍ တကောင်ကိုကျော် တပင်မှာနားသေ...
Highest IQs in History ဉာဏ်ရည်အမြင့်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်မ...